Ngomhla we-18 kaMeyi, ngo-2019, nge-17 (ngo-2019) i-China Animal Husbandry Expo kunye ne-2019 i-China International Animal Husbandry Expo yavula iZiko lase-Wuhan International Expo. Ngenjongo nomsebenzi ophucukileyo okhokelela kuphuhliso lweshishini, i-Animal Husbandry Expo iza kubonisa kwaye ikhuthaze itekhnoloji yakutshanje kunye neemveliso zorhwebo lokuthengiswa kwezilwanyana ukuphucula amandla obuchule kunye nenqanaba kushishino nokukhuthaza ukuphuculwa kweshishini. Lo mboniso weentsuku ezintathu uhanjelwe ngamashishini angaphezu kwe-1000 asuka kwihlabathi liphela kunye nemibutho yezolimo ekumgangatho ophezulu yezizwe ngezizwe.
Njengeshishini lokukhusela izilwanyana eliphakamileyo lasekhaya, iqela labasindileyo belusoloko luthatha uxanduva "lokukhusela nokuhambisa ishishini lokufuya izilwanyana". Phantsi kweemfuno ezintsha zenguqu kunye nophuculo lweshishini lokufuya izilwanyana, ukuZiswa kuzisa iimveliso zobuchule ezingqinelana neendlela zophuhliso ezizayo ukuze zibonakale kwiNdawo yokuBandakanyeka kweZilwanyana.
"Ukujonga ngokuthe ngqo, umsebenzi olungileyo, umgangatho ophezulu kunye nohlaza" kukuphononongwa kwemveliso rhoqo kweqela le-Depond. Iimveliso eziboniswe kulo mboniso ayizizo kuphela izinto ezithengisayo ezishushu ezithe zavavanywa yimakethi, kodwa zikwimveliso emitsha yobuchule enomxholo wekhwalithi ephezulu kwaye iphumelele izigaba ezithathu zikazwelonke zamachiza amatsha ezonyango. Ngexesha lomboniso, amaqabane amatsha kunye nabadala abeze kulo mboniso babonise umdla omkhulu kwiimveliso zeDesmond, uninzi lwabathengi abatsha bavakalise ukuzimisela kwabo ukusebenzisana, kwaye ukuthengiselana okunzulu kuya kubanjwa emva kwentlanganiso.
Lo mboniso ayisiyo kuphela ifestile yeqela ukuba ibonise amandla ayo, ukuphuhlisa abathengi kunye nokukhuthaza iimveliso, kodwa ikwinyathelo elibalulekileyo leqela lokuya nzulu emarikeni kwaye liqonde imfuno yeshishini kunye nemikhwa yehlabathi. Iqela lootitshala bobuchwephesha kunye nabameli babathengi bahlala betshintshiselana ngengqondo yokukhuselwa okunamandla, ubunzima bokulima, itekhnoloji yehlabathi ekhokelayo, itekhnoloji kunye nolunye ulwazi, olubonelela ngezimvo zophando kunye nesikhokelo sophuhliso kunye nokuhlaziywa kwetekhnoloji kwiimveliso zeDepond. Kwixa elizayo, i-Depond izakuqhubeka nokwandisa imfuno yentengiso, isebenzise umba "wokuhambisa amafama", kwaye inike iimveliso ezikhuselekileyo, ezifanelekileyo nezingabizi mali kushishino lokufuya.